संसद्को अन्तिम दिनसमेत जुहारी, कसले कसलार्इ के भने ? « Naya Page
संसद्को अन्तिम दिनसमेत जुहारी, कसले कसलार्इ के भने ?
प्रकाशित मिति : October 15, 2017
काठमाडौं : संविधानसभाबाट रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसद्को कार्यकाल शनिबार रातिबाट सकिएको छ । मुलुक अब नयाँ संसद्को खोजीको चरणमा प्रवेश गरेको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि समानुपातिक उम्मेदवारको मनोनयन आइतबार हुने भएकाले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अघिल्लो दिनबाट संसद्को कार्यकाल सकिएको हो ।
जवाफमा प्रधानमन्त्री देउवाले निर्वाचन आयोगले समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तारले निर्वाचनलाई असर नपार्ने बताइसकेको बताए । ‘प्रदेश नम्बर २ को स्थानीय निर्वाचनअघि समेत मन्त्रिपरिषद् विस्तार भएको थियो । त्यसवेला केही नबोलेर अहिले किन प्रश्न उठाएको रु’ देउवाले प्रश्न गरे । उनले मन्त्रिपरिषद् विस्तार रोक्न विपक्षी दलले राष्ट्रपतिलाई उचाल्न खोजे पनि राष्ट्रपतिले संवैधानिक भूमिका निर्वाह गरेको बताए ।
मन्त्रिपरिषद् विस्तारबारे व्यंग्य गर्दै उनले भने, ‘धेरै ठूलो मन्त्रिपरिषद् किन बनाएको भन्दा प्रधानमन्त्री रिसाउनुहोला, मन्त्रिपरिषद्को संख्या ७० लाई ६ कम पु¥याउनुभयो । यसअघि नै रहेका ५६ मन्त्रीले चुनाव गराउन सक्दैनन् रु किन फेरि आठ–आठजना थप्नुपर्यो रु कि मन्त्रीहरूकै जुलुस निकाल्ने हो ?’
निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा सदस्यको समानुपातिक उम्मेदवारको मनोनयन समय आइतबारलाई तोकेको छ । सोही दिनलाई आधार मान्दै संसद्को कार्यकाल शनिबार मध्यरातबाट सकिएको हो ।